Uyenza njani ioyile efanelekileyo - Iimveliso Zefeng Shui
Uyenza njani ioyile efanelekileyo
Iioyile eziyimfuneko ziqulathe ubom bobomi bezityalo, kwaye ungazenza ekhaya. Ukwenza iioyile ezifanelekileyo ekhaya kuyahluka ukusuka kokulula ukuya kokuntsonkothileyo kwaye kungathatha naphi na ukusuka kwiiyure ezimbalwa ukuya kwiiveki kuxhomekeke kwindlela oyikhethayo. Iziphumo ziyahluka kwisiseko sokungxenga sezityalo kwioyile ephetheyo ukuya kwioyile efanelekileyo kakhulu.
Uyenza njani ioyile efanelekileyo ekhaya
Zintlanu iindlela zokwenza iioyile ezifanelekileyo ekhaya kuxhomekeke kwizixhobo onazo, imveliso ongathanda ukuyisebenzisa, kunye nexesha onqwenela ukulichitha.
Igumbi lokulala leFeng Shui
Iifoto ezili-10 ezintle zoCwangciso lweLucky Bamboo
Indlela yokwenza Amakhandlela eSoy aneeoyile ezifunekayo
Iindlela zevodka kunye nekhaya zokuzihluza zezona zinzima, kodwa zivelisa ioyile efanelekileyo necocekileyo usebenzisa izinyibilikisi kunye neyanamhlanje. Ezinye iindlela zichitha izityalo, kodwa iziphumo zokugqibela ziioyile ezifanelekileyo ezixutywe zioyile.
Ukudityaniswa kwegama losana lotata kunye nonina
Ukwenza iioyile ezifanelekileyo
Udinga ezi zinto zilandelayo kuzo naziphi na iindlela zokwenza iioyile ezifanelekileyo:
Iintyatyambo ezintsha, amayeza, iziqholo, okanye iitrus peels ozikhethile
Ioyile ephetheyo -ezi zilandelayo zezona zikhethwa zithandwayo kwezi oli zinuka kamnandi:
Ioyile yealmondi eswiti
I-cheesecloth engafakwanga, i-muslin, okanye i-gauze entle
Iingxowa zokugcina ukutya zeplastikhi ezivaliweyo
Umdaka kunye ne-pestle okanye i-mallet yokhuni
Ingqayi enomlomo obanzi, enje ngengqayi iMason
Iibhotile zokugcina ezimnyama; I-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka, i-amber emnyama, okanye eluhlaza okomnyama lukhetho olufanelekileyo
Ukulinganisa izinto ezingavunyelwanga ukwenza iioyile ezifanelekileyo
Nangona ezinye iiresiphi zinokwahluka, umthetho osisiseko weoyile yokuthwala amayeza okanye iintyatyambo ngolu hlobo lulandelayo:
1 indebe yeoyile ephethe ioyile nganye ye 1/4imifuno eyomileyookanye iintyatyambo
Umyinge wokusebenzisa iintyatyambo ezintsha okanye imifuno yenye yeekomityi zeoyile ephetheyo ukuya kwi-1/4 indebe yeentyatyambo, amagqabi okanye ezinye izinto zezityalo.
Ukuba usebenzisa iintyatyambo ezintsha okanye imifuno, zibeke eplastikini uze ubabethe ngobunono nge-mallet eyenziwe ngomthi kwaye ngobunono utyumze umba wezityalo ngaphambi kokuba uzenze iioyile.
Uyenza njani i-oyile ebalulekileyo yeoyile (Iindlela ezilula)
Indlela oyenza ngayo ioyile ixhomekeke kwindlela oyikhethayo, kodwa kukho amanyathelo asisiseko kuzo zonke iindlela ezilula. Nganye yezi ndlela ayifuni zixhobo zikhethekileyo, kodwa iziphumo ayizizo ii-oyile ezifanelekileyo, kodwa zizityalo zeoyile ephetheyo.
Amanyathelo asisiseko okwenza kunye nokuGcina iioyile ezifunekayo
Khetha indlela (ngezantsi) yokwenza ioyile yakho ebalulekileyo kwaye uyilandele.
Hlunga umxube. Sebenzisa i-cheesecloth, i-muslin, okanye i-gauze engafakwanga, uxubushe umxube kwisitya seglasi esimnyama okanye ibhotile. Lahla izinto kwaye ugcine ioyile.
Bhala kunye nomhla wesikhongozeli
Gcina ioyile efanelekileyo kwindawo epholileyo, emnyama kwaye eyomileyo. Uninzi lweoyile eyenziweyo eyenziwe ekhaya inobomi beeshelfu kwiinyanga ezintandathu ukuya kwezilithoba kuxhomekeke kwimixube ethile.
Indlela yeSlower Cooker yokwenza iioyile ezifanelekileyo
Le ndlela ilula kwaye ifuna izandla ezincinci emsebenzini emva kokuba ulinganise izinto zakho eziluhlaza. Kuthatha malunga neeyure ezisibhozo kwaye isiphumo kukuthambisa ioyile ebalulekileyo apho izityalo zifakwe kwioyile ephetheyo.
Beka ioyile kunye nemifuno kwivenkile encinci yokupheka.
Jika umpheki ocothayo kwindawo yokugcina ushushu, malunga ne-140 degrees Fahrenheit.
Gquma kwaye mayimilise iiyure ezintandathu ukuya kwezisibhozo.
Indlela yesitovu yokwenza iioyile ezifanelekileyo ekhaya
Le ndlela iphantse yalula njengompheki ocothayo, nangona ukubekwa kwi-oveni yakho kufuna ukujongwa okuthile kuyakufuneka ube sekhaya ngelixa ioyile ikhutshwa. Kuthatha nje iiyure ezimbalwa, kwaye umphumo uyafana nompheki ocothayo onezityalo ezixutywe yioyile ephetheyo.
Leo umfazi kunye nomhlaza ukuhambelana kwendoda
Ukucwilisa i-oven yakho iye kuma-150 degrees Fahrenheit.
Beka ioyile kunye nemifuno kwisitya sokubhaka.
Beka ehovini iiyure ezimbini.
Indlela yelanga yokwenza iioyile ezifanelekileyo
Akukho xesha lokujonga kwaye akukho zixhobo? Akukho maxhala! Zama indlela yelanga yokukhupha ioyile. Oku kuthatha ixesha elide (malunga neeveki ezimbini), kodwa kulula ukuyenza kwaye kukhokelela kwizityalo zezityalo ezixutywe yioyile yenethiwekhi.
Beka iioyile kunye nemifuno kwisitya semasoni kwaye uyitywine ingqayi ngeringi yerabha - iringi yentsimbi iya kungcolisa ioyile.
Beka ingqayi evaliweyo kwilanga elipheleleyo ubuncinci iintsuku ezili-14.
Uyenza njani ioyile efanelekileyo efunekayo (kwiNdlela eNzima)
Iindlela zokusombulula nokunyibilikisa ziyinkimbinkimbi, ziyabandakanyeka, zifuna izixhobo ezizodwa, zithatha ixesha elide, kwaye zifuna isixa esikhulu semathiriyeli yezityalo. Nangona kunjalo, iziphumo ziyioli ecocekileyo ebalulekileyo efana nale unokuyithenga kubavelisi.
ungazinika izinja amathambo enkukhu
Indlela yeSolvent Solvent
Unokukhupha iioyile ezifanelekileyo usebenzisa inkqubo entsonkothileyo usebenzisa ivodka njengesinyibilikisi ukukhupha isitshixo sesityalo kwimpahla eluhlaza. Oku kuthatha iiveki ezininzi, izixhobo, kunye nenani elikhulu lezixhobo, kodwa umphumo uyindlela ecocekileyo yeoyile ngaphandle kokuxutywa. Inkqubo icacisiwe kwividiyo engezantsi.
Ekhaya kubalulekile ulwelo oyile
Unokwenza iioyile ezifanelekileyo usebenzisa ifayile ye-distiller oyile ekhayaukukhupha ioyile kwizinto zezityalo. Yinkqubo entsonkothileyo ende, kodwa umphumo ziioli ezisulungekileyo ezingenasiphene.
Iingcebiso zokwenza iioyile zakho eziBalulekileyo
Xa usenza iioyile zakho ezibalulekileyo ekhaya, jonga ezi ngcebiso zilandelayo:
Soloko uqala ngezixhobo ezicocekileyo kakhulu; zicoceke zicoceke iingqayi, izitya zokupheka ezicothayo, njl. Unokucoca ngesicocisi.
Nangona kubonakala ngathi ukwenza iibhetshi ezinkulu kunokuba lula, kungcono ukuzenza kwiibhetshi ezincinci kuba iioyile ezifanelekileyo zinobomi obufutshane.
Sebenzisa ezona zinto zicocekileyo ezikhoyo; zama ukufumana i-organic herbs kunye neeoyile ukwenza ezona oli zibalulekileyo.
Ungasebenzisa ifanele ukuthululela iioyile zakho kwiibhotile zedrophu enye yokusetyenziselwa usetyenziso olulula.
Soloko unxiba iiglavu xa uphatha okanye udibanisa iioyile ezifanelekileyo kwaye ugcine iioyile ezingangxengwanga ukuba zingadibani nolusu lwakho; Ukuqhagamshelana ngqo kunokubangela ukuphendula.
Nciphisa iioyile zakho ezifanelekileyo ngaphambi kokuzisebenzisa. Umgaqo olungileyo wesithupha ngamaconsi ama-2 eoyile esulungekileyo kwitispuni enye yeoyile ephetheyo.
Qaphela imigaqo esisiseko yokhuseleko, njengokungaze utye ioyile ebalulekileyo.
Iioyile zakho ezifanelekileyo zinokutsha, ngoko zigcine kude nedangatye elivulekileyo okanye eminye imithombo yobushushu.
Izixhobo kunye nezixhobo zokwenza iioyile ezifanelekileyo
Ungazikhulisa iintyatyambo zakho eziphilayo kunye namayeza, okanye unokufumana umgangatho ophezulu owomileyo weentyatyambo kunye neentyatyambo kwi-intanethi.
Iintaba zeRose Herbs inoluhlu olothusayo lwemifuno kunye nezinto zokutyala zokwenza iioyile eziyimfuneko eziphilileyo nezomileyo.
Apothecary yobuninzi inikezela ngezixhobo zexabiso eliphantsi kunye nokuhanjiswa kwempahla.
Ukuba ucwangcisa ukuhambisa iioyile zakho ekhaya, cinga ukuthenga a i-distiller yasekhaya yenziwe kwangaphambili. Kuyabiza, kodwa lutyalomali olulungileyo ukuba ufumanisa ukuba ukhetha ukuzenzela iioyile zakho ezicocekileyo.
Isixhobo seTools ineebhotile kunye nezihambisi ezithengisela iioyile zakho ezenziwe ekhaya.
Ubugcisa bokwenza iioyile ezifanelekileyo
Nangona zingaphaya kwama-700 iintlobo zezityalo ezinevumba elimnandi ezisetyenziselwa ukwenza ii-oyile ezifanelekileyo namhlanje, zingama-40 kuphela zazo ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo. Kukwakho nendibanisela yendibaniselwano yeentyatyambo, amayeza kunye neziqholo. Zininzi iindlela zokulungisa ezilula, ezimnandi, kwaye zivelise ioyile enuka kamnandi yokwenza ukuvumelana kunye nokulingana ekhayeni lakho. Nje ukuba ufunde indlela yokwenza iioyile ezifanelekileyo, uya kuzifumana uyonwabela inkqubo kwaye uxhamla kwiziphumo.
Iinwele Salons Ne Beauty Salons Imveliso Yekati Utywala Ulutha Amaqela Amaqela San Francisco Bay Area Arts Usetyenziso Lwewindows Kwi- Ivenkile Yewindows
Cocktail Iindlela Zokupheka
Malunga Bantwana Clothing
Ephakamileyo Isithende Izihlangu
UkuPhononongwa okuPheleleyo kweProtini yePowder yokutya okungama-365
Isampula Enkosi Amanqaku ootitshala
I-13 yeengcinga zokuzalwa kwabakwishumi elivisayo
Amagama angama-150 + oMvundla abaFazi aSuka kuLwahlukileyo eya kwiDume
Iindlela zokuqiqa zabafundi
ubhalele umntwana wakho ileta yexesha elizayo
usenokuphinda ungene ku-facebook
ungambuyisa njani umfazi wakho emva kokwahlukana
Iikhathalogu zasimahla ngeposi zabantwana
iimpawu zokuqala inja yakho ikhulelwe
Inja ingaphila ixesha elingakanani nesigaba sesine sezintso
Ekhaya School Slideshows